Maleeshiyo beeleed xoog kula wareegay TV-ga maamulka Puntland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Maleeshiyo beeleed hubeysan ayaa saaka xoog kula wareegay TV-ga maamulka Puntland ee xarruntiisu tahay magaalada Garowe.
Maleeshiyada ayaa markii ay la wareegeen xarrunta TV-ga hawada ka saaray, sidoo kalana dhamaan shaqaalihii TV-ga kazoo saaray dhismahaas.
Lama soo sheegin wax dhibaato ah oo ka dhacay xarrunta TV-ga markii maleeshiyadu la wareegeysay, sidoo kale ma jiro war ilaa hadda kazoo baxay maamulka Puntland oo arrintaan ky saabsan.
Ma cadda sabata maleeshiyadaasi ula wareegeen dhismaha xarrunta TV-ga maamulka Puntland, hase ahaatee arrintaas ayaa kusoo beegantay kadib markii shalay madaxweyne C/weli Gaas uu xilki ka xayuubiyey agaasimihii TV-gaas Axmed Maxamed Cali ”Kismaayo”.
Madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Gaas ayaa booskii Axmed Kismaayo ku badelay C/fataax Nuur Qodax (Ashkir) oo lasoo shaqeeyay Shirkadda Golis, aqoonta saxafadana kusoo bartay wadanka Suudaan.
Axmed Kismaayo ayaa mudo ka badan toban sano lasoo shaqeeyay laanta afka Somalia ee BBC, sidoo kalana horay ula soo shaqeeyey Raadiyow Sweden qaybta Somaliga iyo Radio Muqdisho intii u dhaxeysay 1986 ilaa 1991-kii.
Axmed Kismaayo oo ah khabiir dhanka saxaafada ah ayaa waxaa xilkan u magacaabay madaxwaynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole, waxaana la sheegayaa in maleeshiyaadka TV-ga qabsaday ay aamisan yihiin in C/weli Gaas qaab qabiil xilka uga qaaday Axmed Kismaayo.
TV-ga iyo Radio Puntland ayaa furan wax ka yar sanad, waxaana dhawaan dhisay dowladda Taliyaaniga, iyadoo ay ku baxday lacaga aad u badan.
somalia:No More Troops From Sierra Leone to Join AMISOM